LEDbow အဘယ်သူမျှမ controller ကို
အချက် နည်းပညာဆိုင်ရာပေးဖျောပွ မှတ်စု
ဆက်သွယ်ရေး parameter သည် အများဆုံးကြိမ်နှုန်း output power ကို 20dBm
Maximum transmission distance (line of sight) 2km built-in အင်တင်နာ
RF ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုနှုန်း 250kbps သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော
serial port ကို baud rate ကို 1200-230400bps သင့်အောင်လုပ်နိုင်သော
sensitivity ကိုလက်ခံခြင်း 115dBm 1% Loss rate
antenna interface ကို U.FL
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ parameter သည် input ကို
switch အဆက်အသွယ်စွမ်းရည် ≥10A
switch အဆက်အသွယ်ဘဝ ≥100,000ကြိမ်
အလင်းမှိန်ခြင်း ဗို့အားအလင်းမှိန်ခြင်း 0~10VDC; -10~+10mA
PWM အလင်းမှိန်ခြင်း frequency：200~4KHz
လျှပ်စစ် parameters တွေကို အတိုင်းအတာ 84(W) x 86(H)
ပြင် shell ကိုပစ္စည်း ခရမ်းလွန်သက်သေပြအင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်
အတော်လေးစိုထိုင်းဆ 5~95%，No frosting
လျှပ်ကာခုခံ other≥100MΩမှ AC အ input ကို
ဗို့အားကိုဆီးတားခြင်း အဆိုပါသုညလိုင်းမီးလိုင်း ground1.5KV မှ shorted ဖြစ်ပါတယ် Leakage current<5ma
IP ကိုအဆင့် IP65
မအောင်မြင်မှုများအကြား mean အချိန် MTBF≥10000h
LEDbow Technologies ကလီမိတက်
မေး2. Can I haveasample order Nema controller ကို၏ ?
မေး4. How to proceed an order Nema controller ကို၏ ?